नेप्सेमा २.७० अंकको सुधार | गृहपृष्ठ
Home लगानी नेप्से विश्लेषण नेप्सेमा २.७० अंकको सुधार
on: २० मंसिर २०७५, बिहीबार १६:३८ नेप्से विश्लेषण, मुख्य खबर, लगानी
नेप्सेमा २.७० अंकको सुधार
मङ्सिर २०, काठमाडौं (अस) । साताको अन्तिम दिन नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव २४ प्रतिशतले बढेर बन्द भएको छ । यस दिन १ हजार १ सय १८ विन्दुबाट शुरु भएको परिसूचक एक घण्टामा घटेर १ हजार १ सय ९ विन्दुसम्म पुगेको थियो । बैंकहरुमा लगानी योग्य रकमको अभाव भएको भन्दै बैंकले निक्षेपमा १३ प्रतिशतसम्म ब्याजदर बढाएका छन् । बैंकहरुले निक्षेपमा ब्याजदर बढाएपछि बुधवार बजार २२ अंकले घट्न पुगेको थियो । राष्ट्र बैंकले बैंकमा भएको तरलता अभावलाई सहज बनाउन निक्षेपमा रकम जम्मा गर्ने भएपछि बजार थोरै अंकले बढ्न पुगेको हो । कारोबार भएको डेढ घण्टादेखि बजार बढ्न थालेको हो । यस दिन बजार बढेर १ हजार १ सय २६ विन्दुसम्म पुगेको थियो । अन्त्यमा भने २ दशमलव ७० अङ्कले बढेर १ हजार १ सय २० दशमलव ८४ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ ।
बैंकहरुले निक्षेपमा ब्याजदर बढाएपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उच्चस्तरीय वित्तीय समन्वय समितिको बैठक राखेका थिए । सो बैठकले ब्याजदर र शेयर बजारको बारेमा सकारात्मक कुरा ल्याएपछि लगानीकर्ताहरुको मनोबल बढेको हो । जसको सकारात्मक असर आजको बजारमा देखिएको छ ।
यस दिन कारोबार रकम अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा १ दशमलव ६७ प्रतिशतले घटेको छ । कारोबार रकम रू. ६३ लाख १४ हजार घटेकोे हो । यस दिन ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन सेन्सेटिभ इण्डेक्स शून्य दशमलव २३ प्रतिशत बढेर २ सय ३८ दशमलव ३३ विन्दुमा पुगेको छ ।
दश समूहको परिसूचकमा आठ समूहको परिसूचक बढेको छ भने जलविद्युत र उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको परिसूचक घटेको छ । जीवन बीमा समूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी शून्य दशमलव ८९ प्रतिशतले बढेको छ ।
१६२ कम्पनीको कारोबार
यस दिन १ सय ६२ कम्पनीको कारोबार भएको छ । त्यसमध्ये ७० कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्न पुगेको छ भने ६५ कम्पनीको शेयर मूल्य घट्न पुगेको छ । २७ कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सको शेयर मूल्य ७ दशमलव २९ प्रतिशतले बढेर प्रतिकित्ता रू. ३ सय ९७ मा कारोबार भएको छ । त्यसैगरी, अपि पावर कम्पनीको शेयर मूल्य ५ दशमलव ६७ प्रतिशतले बढेको छ । कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्य ७ दशमलव ४२ प्रतिशतले घटेर प्रतिकित्ता रू. ७ सय ६० मा कारोबार भएको छ ।
यस दिन नेप्सेको १४ दिने रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इण्डेक्स ओभर सोल्ड अर्थात् २५ दशमलव ७६ स्केलमा रहेको छ । यसले बजारमा विक्री चाप भएको देखाउँछ । नेप्सेको एडी रेशियो १ दशमलव शून्य ७ प्रतिशत रहेको छ । यसले बजार वुलिश प्रवृत्तिमा रहेको देखाउँछ ।
११ बैशाख २०७६, बुधबार १६:४२
११ बैशाख २०७६, बुधबार १५:५८
दोस्रो घण्टामा ६.१३ अंकले नेप्से बढ्दा २१ करोडको कारोबार (१ बजेको अपडेट)
११ बैशाख २०७६, बुधबार १३:१०
११ बैशाख २०७६, बुधबार १२:११